Your telefoonka u badan tahay kor u laban sida camera aad. Sida arrin xaqiiqada ah ma aha wax aan caadi ahayn si aad u ogaato inta badan dadka isticmaalaya telefoonka sidii qalab lagu kaydiyo sawir. Tani waxay noqon kartaa dhibaato haddii aad u aragto in aad waayi kartaa telefoonka oo la dhan ah xasuus aad abuuray.
Tani waa sababta ay fikrad fiican si ay u gudbiyaan sawiro kuwaas oo si aad computer si looga fogaado khasaare shil ah ee files sawirka taasoo si fudud u dhici kartaa haddii ay sii telefoonka. Waxa kale oo laga yaabaa in aad u baahan tahay si loo badbaadiyo bannaan ee aad taleefan ka mid ah hawlaha lagu hagaajinayo kartida aad telefoon ama aad rabto in aad gurmad ah ee photos aad on your computer. Sabab kasta, ka aad telefoon si aad u computer wareejinta sawirada uusan heysan in ay adag tahay.
Sida xaqiiqadu halkan jira dhowr siyaabood oo ay u gudbiyaan sawirro aad ka phone Samsung si aad u computer. Waxaan eegi doonaa qaar ka mid ah fudud iyo ku siin tallaabo hagitaan talaabo talaabo ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo mid kasta.
1. Isticmaalka Wondershare MobileGo
Wondershare MobileGo laga yaabaa habka ugu fudud ee ay u gudbiyaan sawirro aad ka phone Samsung si aad u computer. Aynu u samayn in lagu muujiyo barta. Waxaan rabnaa in la wareejiyo files isticmaalaya version Windows ee MobileGo laakiin habka la mid ah u shaqeeya version Mac ah.
Haddii loo maleeyo in aad ku rakibtay Wondershare MobileGo on your computer, halkan tallaabada ugu horreysa.
Talaabada Koowaad: Calan Your Samsung Phone:
Connect aad telefoon si aad u computer sidoo kale la isticmaalayo fiilooyinka USB ama Wi-Fi. Software waa in la ogaado oo muujiyaan aad Samsung Phone.
Tallaabada Labaad: Saxiixa sawiro aad:
Si aad u gudbiyaan sawiro aad u baahnaan doontaa inaad guji "Sawirro" tab geedka buugga bidix. Halkan waxaad ka heli doontaa dhammaan sawiro ku saabsan telefoonka Samsung. Dooro kuwa aad jeclaan lahayd inaad ku wareejiso si aad u computer ka dibna riix "Dhoofinta." Dooro goobta aad jeclaan lahayd in aad sawiro dhoofiyo si ay u badbaadaan at iyo habka wareejinta bilaabi doonaan.
Hubi in aad telefoonka xiran yahay si aad u computer inta ay socoto oo dhan. Sida in, aad haddeer haysatidna nuqul ka mid ah sawirada aad on your computer.
2. Isticmaalka Samsung Kies
Si kale oo la isku hallayn karo inay sawiro ka phone Samsung wareejiyo si aad u computer waa adigoo isticmaalaya Samsung Kies. Tani waa Samsung software Manager Phone rasmi ah oo waa arrin muhiim u ah suuqa kala iibsiga file, waxaa ka mid ah dhammaan faylasha kale taleefanka ku jiraan videos, audio iyo xitaa waraaqaha. Bal aynu eegno sida ay u gudbiyaan sawiro isticmaalaya Samsung Kies.
Haddii loo maleeyo in aad soo bixi oo lagu rakibay nooca ugu dambeeya ee Kies Samsung ee Software on your computer, halkan tallaabada mid.
TALAABADA KOOWAD: Isku aad telefoon si aad u computer isticmaalaya fiilooyinka USB. Kies waa in la aqoonsado oo ay muujiyaan faahfaahinta telefoonka ee sidan.
Talaabada 2: Saxiixa sawirada: riix qaybta sawirada ku yaalla khaanadda bidix ku Kies. Dhamaan sawirada aad lagu soo bandhigi doonaa column gacanta midig. Dooro mid aad rabto inaad ka dhoofin in aad computer iyo guji icon Save the.
Sida in aad wareejin doono sawirada si aad u your computer iyadoo la isticmaalayo Kies.
3. Isticmaalka Email
Waxaad sidoo kale sawiro ka phone Samsung wareejin karaa si aad u computer via email. Waxaa xusid mudan in aad ku wareejin karaa oo kaliya dhowr ka mid ah sawirada aad waqti ah (laga yaabaa oo ku saabsan 3 waqti). Sidaas daraaddeed waa hab heer sare ah eheeyn, in aan ku xuso waqti ka mid ah sawirada aad wareejinta. Waxaad isticmaali kartaa habka tahay haddii aad si yar sawirada wareejiyo.
TALAABADA KOOWAD: fur gallery ku saabsan telefoonka ka dibna garaac album ay ku jiraan sawiro aad rabto in aad soo dirto.
Talaabada labaad: Tubada sawirka aad rabto in aad ku dirto.
Tallaabada Saddexaad: Tubada on Email ama Gmail aad shaashadda. Koobanahay aad fariin ka dibna tubbada button dirto.
Haddii aad dooratay Gmail aad default xisaabta Gmail waxaa loo isticmaali doonaa haddii aad leedahay wax ka badan hal.
Hababka aynu ka hadalnay kor ku xusan la isticmaalayo email laga yaabaa inay tahay markii ugu baabbi'iya. Tani waa sababta aad laga yaabaa kaliya wareejin karo oo ku saabsan 3 photos mar sidan. Sidaa darteed haddii aad leedahay ururinta weyn ee photos aad telefoon, waxaa laga yaabaa in aad in aanay awoodin inay isticmaalaan habkan.
Waxaan aad ugu boorinayna kale 2 hababka sababtoo ah waxa ay u oggolaadaan in aad u guurto Muga weyn ee files in wakhti aad u yar. Waxay u arkaan xaqiiqada ah in mar waa qiimo leh oo aad Ma rabo in ay ku qaataan diraya dhowr sawiro waqti.
Waxa kale oo ay tahay mid xaq ah oo u sheegay in mid kasta oo ka mid ah saddex noqon kartaa faa'iido ama aan baahidaada. Sidaas darteed waa in aad ka aad adigu doorato in aad isticmaasho.
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Pictures ka Samsung Phone in Computer